निर्वाचन आयोग Archives - Lokpati.com
Tag - निर्वाचन आयोग
प्रचण्ड-नेपाल नेकपाको प्रश्न : संसद बिघटन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, निर्वाचन आयोग त्यसविपरित जान मिल्छ ?
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निष्पक्ष निर्णय लिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ। प्रचण्ड–नेपाल समूहले बहुमत पक्षले गरेको निर्णयले नै आधिकारिकता पाउने दाबीसहित मंगलबार आयोगलाई बुझाएको...
पार्टीमा हामी २७ प्रतिशत छौं, मूल पार्टी हाम्रो हो
काठमाडौं। नेकपाको केपी ओली समूहले मूल पार्टीको वैधानिक मान्यताका लागि दाबीसहित निर्वाचन आयोगलाई जवाफ पेस गरेको छ । ओली समूहमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, महासचिव विष्णु पौडेल...
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भन्योः चुनावी गतिविधि रोक्नुहोस्
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल पक्षले निर्वाचनका सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गर्न माग गरेको छ। पार्टीको आधिकारिक पत्र लिएर सोमबार नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल निर्वाचन...
निर्वाचन आयोगको दफा ४४, किन डराए दुवै पक्ष ?
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल ऐनको दफा ४४ अनुसार पार्टी आधिकारिकताको दाबी पेस गर्न नेकपाका दुवै पक्षलाई पाँच दिनअघि पत्राचार गर्‍यो।
तर, दुवै पक्षले आयोगले भनेअनुसार नभई दफा ५१ अनुसार पार्टी विधान संशोधन र...
प्रचण्ड-माधव पक्षले भन्यो- निर्वाचन आयोगको पत्र ‘अस्वाभाविक र असान्दर्भिक’
२२ पुष २०७७, बुधबार
काठमाडौं। नेकपाको प्रचण्ड- माधव पक्षले निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई पठाएको पत्र अस्वभाविक र असान्दर्भिक भएको जवाफ दिएको छ। गत शुक्रबार आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई फरक फरक ब्यहोराको चिठी लेखेर पठाएको थियो।
निर्वाचन आयोगले गर्‍यो दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन, ओली पक्ष असन्तुष्ट
२० पुष २०७७, सोमबार
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर निर्वाचनको अवधिमा पनि राजनीतिक दलका विवाद समाधान गर्न सक्ने नियम बनाएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली समूहले असन्तुष्ट बनेको छ।
आइतबार आयोगको बैठकले...
दुवै समूहलाई आयोगको पत्र : ‘आधिकारिता दावी पुग्ने प्रमाण ल्याउनू’
काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई शुक्रबार पत्राचार गरेर उनीहरूले गरेको पत्रका विषयमा थप स्पष्ट पार्न भनेको छ। आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष सम्बोधन गर्दै अलग–अलग प्रकृतिको पत्र...
निर्वाचन आयोगद्वारा ‘उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना’ फिर्ता
काठमाडौं, १८ कात्तिक। निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट पारित ‘उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना’ गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ। आयोगले बनाएको ‘उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्दे्शिका-२०७६’ सँग मेल...
निर्वाचन आयोगद्वारा ६ बुँदे निर्वाचन आचारसंहिता जारी
काठमाडौं, ७ कात्तिक। निर्वाचन आयोगले ६ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ। आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ६ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको हो।
आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन आयोग ऐन अन्तर्गत...
विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मताधिकारका तीन विकल्प
काठमाडौं, ३ भदौ। निर्वाचन आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारका तीनवटा विकल्प अघि सारेको छ। सर्वोच्च अदालतले करिव डेढ वर्षअघि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था तयार गर्न सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरेको...
शेयरमा बैंकको लगानी बढ्दै
सरकारी दाबी: प्रतिनिधिसभा विघटन दुई तिहाइका लागि!
नेकपा निर्णय-ओलीलाई ‘स्पष्टीकरण’, पौडेल ‘बर्खास्त’
दीपक मनाङे वामदेव गौतमतिर
ओली काेटाबाट सभासद बनिसकेकी मल्लले प्रधानमन्त्रीकै मुद्दा हेर्न मिल्छ ?
सेस्मिक सर्भेको नतिजा लिएर चिनियाँ टोली नफर्कंदा पेट्रोलियम अन्वेषणमा ढिलाइ
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस पत्र नै शंकास्पद
इजलासमा पेस भएका कागजात नै सरकारद्वारा ‘गायब’
नेकपाका सात लाख पार्टी सदस्य प्रचण्ड-नेपालकाे पक्षमा छन् : डा. दिनेशचन्द्र देवकाेटा
‘राजावादीकाे भाेटले केपी ओलीले चुनाव जितेका हुन्’
‘सरकारबाट सामाजिक र राजनीतिक अधिकारमाथि प्रहार भइरहेको छ’
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बर्दियाको सक्रियता : अवैध सामान बरामद
टाटाको कम्प्याक्ट ट्रक ‘इन्ट्रा भी २०’ बिक्री सुरु
चार महिनापछि चालु खाता घाटामा, रेमिट्यान्स बढ्याे